Homeसमाचारशरीरमा दुबी आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आ’त्तिनु पर्दैन उपचार स’म्भव छ
November 4, 2020 admin समाचार 8969
दुबीकै कार’ण तनाव लिनु नपर्ने चिकि’त्सकहरु सुझाउँछन् । छाला तथा सौन्दर्य विशे’षज्ञ प्राडा. धर्मेन्द्र कर्णका अ’नुसार सेतो दुबी ह’टाउन सकिँदैन भन्ने सोचाइले कति’पय युवायुवती तना’वमा बस्ने गरेका छन् तर त्यसो होइन, उपचार गरे दुबी ठीक हुन्छ । छालामा रङ दिने को’ष हुन्छ ।
जसलाई मेला’नोसाइट भनिन्छ। मेलानोसाइटको सं’ख्या हरेक व्यक्तिको शरीरमा ब’राबर हुन्छ। तर, यसले नि’काल्ने रङ भने व्य’क्तिपिच्छे फरक हुन्छ । ‘शरीरमा भएको मेलानो’साइटको संख्या घट्यो वा नष्ट भयो भने वरि’परिको तन्तु सेतो हुन पुग्छ । त्यसलाई नै सेतो दु’बी भन्ने गरिन्छ।
हरेक व्यक्तिको शरी’रमा रोग प्रतिरो’धात्मक क्षमता हुन्छ। वाता’वरणको तापक्रम झैं रोगप्र’तिरोधात्मक क्षमता पनि घ’टबढ भइरहन्छ। शरीरको प्रतिरो’धात्मक क्षमता आ’वश्यक भन्दा बढी भएर छालालाई रङ दिने कोष (मेलानोसाइट) लाई न’ष्ट गर्न पुग्छ।
रोगविरुद्ध जाइ’लाग्ने रोग प्रतिरो’धात्मक क्षमताले कहि’लेकाहीँ आवश्य’कभन्दा बढी सक्रिय की’टाणुको साटो आफ्नै शरीर’का कोषलाई नष्ट गर्न थाल्छ। छालालाई रङ दिने कोष’लाई नष्ट गर्दा दुबी देखिन्छ।
जुन ठाउँमा छाला च&लिरहन्छ वा चोट’पटक लागिरहन्छ । त्यही ठाउँमा सेतो दुबी देखा पर्छ। विशे’षगरी ओठ तथा आँखाको वरि’परि, घाँटी, काखी, कम्मर, औंलाको टुप्पो’लगायत ठाउँमा दुबी देखिन्छ।
सेतो दुबी फै’लने र नफैलने गरी दुई कि’सिमको हुन्छ। फैलने खालको दुबी शरीरका विभिन्न अंग’मा देखा पर्छ। नफैलने खाल’को दुबी एकै ठाउँमा मात्र देखा पर्छ। दुबी बढ्ने गरेको छ कि छैन ख्या’ल गर्नुपर्छ। बढि’रहेको छ भने त्यसलाई तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने चिकि’त्सक बताउँछन् । तर, नफैलने खालको दुबी छ तत्का’ल आत्तिहाल्नुपर्ने अ’वस्था हुँदैन ।
अहिले सबै खा’लका दुबीको नेपालमै उप’चार हुन्छ। दुबी कति भागमा फैलिएको छ र कति प्रभा’व परेको छ त्यसका आधारमा उप’चार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। दुबी जति पुरानो भयो उपचार’मा झन् धेरै समय लाग्ने हुन्छ ।
अनुहार, छाती, पेट, ढाडमा दुबी दे’खिएको छ भने चाँडै निको पार्न सकिन्छ। औंला’मा छ भने समय धेरै लाग्छ। दुबी निको पार्ने उपचार पद्धति धेरै प्रकार छन्। मे’डिकल र स’र्जिकल गरी दुवै खा’लका उपचार पद्धति अपना’उन सकिन्छ। -खबरहब बाट
February 8, 2021 admin समाचार 5611
सन्तान नभ’एर अस्पतालमा जँचाउन सहर आएका काले विश्वकर्माले घर फर्किँदै गर्दा आफ्नी पूर्व प्रेमिका भेट्छ । काखमा एक सन्तान बोकेकी उनी पतिको साथ छिन् भने काले आफ्नी पत्नीको साथ । विग’तको धोका सम्झिँदै काले अलम’ल्ल
April 13, 2021 admin समाचार 4205
December 22, 2020 admin समाचार 6522
लोकप्रिय गा’यिका अञ्जु पन्तले दोस्रो विबाह गर्ने मा,नसिकतामा छिन् । छोरी परितोषिकाले हरेक पल आमा अञ्जुलाई वि’बाहको सल्लाह दिँदै आएका कारण अञ्जुले छोरीकै कारण पनि छोरीको आ,त्मसम्मान र उनको इ’च्छा पूरा गर्न र आफ्नो भावी